Hanohitra ve izany ny Depiote TIM?
2007-10-02 @ 17:11 in Andavanandro
Ny gazetin’ny mpitondra eto an-toerana ihany no nakako ity vaovao ity. Marihina hatrany fa amin’ny teny malagasy ilay gazety ka mety tsy hivoaka amin’ny aterineto (Ny gazety taratra ihany no fantatro hoe mivoaka amin’ny teny malagasy ka mivoaka amin’ny aterineto.) Tsy vao androany na omaly ihany koa no nabaribary ho lohateny lehibe eo amin’ny pejy voalohany izy ity fa tamin’ny herinandro lasa.
Ny fomba nanehoany azy ihany koa dia mody natao madinika ny hoe Sendika Kristiana Malagasy ary amin’ny soratra vaventy ny hoe “Toherina ny fampiasana ny vehivavy amin’ny alina”. Rehefa navadika ao amin’ny pejy faharoa mifandraika amin’ny lohateny ny pejy dia nambarany fohifohy tao fa tamin’ny filan-kevitry ny Minisitra tamin’ny 11 jona ary efa mipetraka hodinihin’ny depiote rehefa miditra eo ireo no nametrahana ilay fampiasana ny vehivavy amin’ny alina araka izay tian’ny mpampiasa, ny fampitomboana ny ora hiasana ho 45 raha 40 amin’izao fotoana izao ary ny fampihenana ny andro hakana aina ho 15 raha 30 andro isan-taona teo aloha. Marihiko indray mandeha fa gazetin’ny mpitondra no nanoratra ireo teny ireo fa tsy ny gazetim-panjakana tsy akory.
Avy eo dia milaza ny tsy rariny aterak’ireo fanapahan-kevitra ireo ny sendikalista namory ny mpanao gazety tamin’io fotoana io ka anisan’izany ny filazana fa tandindomin-doza ny fianakaviana sy ny ankohonana malagasy amin’ity fepetra vaovao ity ary mampihena be dia be ny hery hikarakarana ny ao an-trano no sady mety tsy hihaona intsony ny mpivady (satria amin’io fepetra vaovao io dia azo ampiasaina isan’alina ny vehivavy) ka naran-tsy very no sisa.
Dia gaga ihany aho hoe mahatsapa izany ihany ve ny mpitondra sa ny ao amin’ny gazety ihany no resy lahatra? Koa raha fantatra ary izany antony izany dia handray ny fepetra tokony horaisina amin’izany ve ny depiote ka hahasahy hanohitra io volavolan-kevitra avy amin’ny filan-kevitry ny mnisitra io? Sa hijerena ny fihetsik’ireo depiote vaovao ireo mihitsy no nametrahana azy tao? Dia lasa ny saina mamarana hoe hijery ny rariny ve ny solombavambahoaka vaovao sa avy amin’ny mpitondra ity ka aleo ekena? Mbolo ho hitantsika soa aman-tsara ny valiny.